Nepal Deep | रिपोर्ट: मुलुकव्यापी सहकारी संस्थाहरुको उत्साहवर्द्धक तथ्यांक
रिपोर्ट: मुलुकव्यापी सहकारी संस्थाहरुको उत्साहवर्द्धक तथ्यांक
सोमबार, पुष २० २०७७
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले मुलुकभर रहेका सहकारी संस्थाहरु बारे एक विस्तृत अध्ययनको बार्षिक तथ्यांक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नु भएको छ।
विभागले २०७७ श्रावण देखी कात्तिकसम्म सात वटै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुसंगको सहकार्यमा गरेको अध्ययन अनुसार मुलुकमा हाल २९ हजार ८ सय ८६ प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू रहेको प्रस्तुत रिपोर्ट बताउँदछ। रिपोर्ट अनुसार सहकारीमा २० वटा विषयगत केन्द्रीय संघहरू, १ वटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक, १ वटा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, ७० वटा जिल्ला सहकारी संघ र २४१ वटा विषयगत जिल्ला सहकारी संघहरू क्रियाशील रहेका छन् ।
मुलुकभर रहेका २९ हजार ८ सय ८६ प्रारम्भिक सहकारी संस्था मध्ये संघीय सरकार अन्तर्गत १ सय २५, प्रदेश सरकार अन्तर्गत ६ हजार २ र स्थानीय सरकार अन्तर्गत २३ हजार ७ सय ५९ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् ।
यसै गरी सहकारी संघसंस्थामा आवद्ध कूल सदस्य संख्या ७३,७४,६२ रहेका छन् जस मध्ये महिला ५६% र पुरुष ४४% रहेका छन् । पुरुष सङ्ख्याको तुलनामा महिला सङ्ख्या १२% ले उत्साहप्रद रूपमा बढी छ।
मुलुकभरी रहेका सहकारीमा कूल शेयर पूँजी रु. ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख १५ हजार ८ सय ३ रहेको छ । त्यसैगरी, बचत संकलन रु.४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४६ हजार ४ सय ७३ र कूल ऋण लगानी रु.४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड २३ लाख ११ हजार ३ सय ८१ रहेको पनि रिपोर्ट बताउँदछ। तीसहकारी संघसंस्थाले मुलुकभर ८८ हजार ३ सय ९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन् ।
मुलुक संघियतामा गई निर्माण भएका ३ तहका सरकारहरुको सञ्चालन भएपछि केन्द्रीकृत रुपमा सहाकारीहरु बारे यस खालको विस्तृत तथ्यांक आएको यो पहिलो पटक हो। मुलुक भरमा:
प्रदेश १ मा रहेका ४,७३७ सहकारी संस्थामा संलग्न कूल सदस्य ९,३५,७०० मध्ये महिला ५,००,२४९ र पुरुष ४,३५,४,५२ जना रहेका छन्। यस प्रदेशमा सहकारी मार्फत २०,६८५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
प्रदेश २ मा रहेका ४,१५३ सहकारी संस्थामा कुल सदस्य ५,५५,१९७ मध्ये महिला २,५२,११२ र पुरुष ३,०३,०८५ जना रहेका छन् । यस प्रदेशमा सहकारी मार्फत १०,८४३ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
बाग्मती प्रदेश सहकारी संस्थाहरुको संख्या सर्वाधिक छ। प्रदेशमा रहेका १०,४१८ सहकारीमा २७,१७,४६९ कूल सदस्य मध्ये १४,५७,२०२ महिला र १२,६०,२६७ पुरुष रहेका छन् । यस प्रदेशमा सहकारीले ३३,८९२ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा रहेका २,६७१ कुल सहकारी संस्थामा ११,१६,६३२ सदस्य रहेकोमा ६,४२,१३० महिला र ४,७४,५०२ पुरुष रहेका छन्। सहकारीले यो प्रदेशमा ७,६३८ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगार दिलाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ३,७५५ सहकारी संस्था छन्। ती संस्थाका ८,९८,६११ कूल सदस्य मध्ये ५,७६,३१२ महिला र ३,२२,२९९ पुरुष रहेका छन् र यहाँ सहकारीले ६,९८९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिलाएको छ।
प्रदेशहरु मध्ये सबैभन्दा कम जनसंख्या रहेको कर्णालीमा १,९६७ सहकारीहरुमा कुल ४,४९५६ सदस्य छन् जसमा २,७२,०३३ जना महिला र १,३२,९२३ जना पुरुष रहेका छन्। सहकारीले यो प्रदेशमा ४,५,३४ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ।
कूल २,०६० सहकारी संस्थाहरु भएको सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ५,४२,९८९ कूल सदस्य संख्या मध्ये ३,१९,१०० महिला र २,२३,८८९ पुरुष रहेका छन्। यस प्रदेशमा सहकारी मार्फत २,८१५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
यस पूर्वको विवरणमा ३४,८३७ सहकारी संघसंस्था रहेको देखिएकामा कतिपय सहकारी संघ संस्थाको एकीकरण भएको वा अरु निश्कृय रहेको कारण कूल संख्या २९,८८६ कायम भएको हो । विभागले शुन्य लागतमा देशभरका ७ वटै प्रदेश तथा ७५३ स्थानीय सरकारको सहकार्यमा प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा विवरण तयार गरेको बताइएको छ। मुलुक भरमा समग्र सहकारी तथ्यांक र सूचकहरु सकारात्मक उर्ध्व गतिमा रहेको देखिएको कुरा रिपोर्टले बताएको छ।